NUSOJ Oo Xustay Maalinta Caalamiga Ah Ee Joojinta Dambiyada Aan La Ciqaabin Ee Ka Dhanka Ah Suxufiyiinta – Great Banaadir
Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa maanta Magaalada Muqdisho iyo qaar kamid ah gobolada dalka ku qabtay Munaasabaddo si qurux badan loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay maalinta caalamiga ah ee joojinta dambiyada aan la ciqaabin ee ka dhanka ah Suxufiyiinta.
Wariyaal ka socday qeybaha warbaahinta dalka ayaa kasoo qeybgalay munaasabaddaha ururku maanta qabtay, kuwaasi oo ka kala dhacay Magaalooyinka Baydhabo, Kismaayo, Gaalkacyo iyo Caasimadda Dalka Soomaaliya ee Muqdisho.
Munaasabadda Muqdisho lagu qabtay ayaa ka dhacday Fagaaraha Beerta Dhagaxtuur, halkaasi oo uu Xoghayaha Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed Omar Faruk Osman uu kula hadlay wariyaasha.
Xoghayaha ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dhibaatooyinkii loo geystay wariyaasha ee isugu jiray dilka, xarigga, jirdilka iyo hanjabaadda, wuxuuna caddeeyay inaysan jirin cid illaa iyo hadda loo maxkamadeeyay dambi ay ka galeen suxufiyiinta, isagoona ku baaqay Hay’addaha Garsoorka inay wax ka qabtaan Baaqqa Ururka ee ah in caddaaladda la horkeeno dambiilayaasha dhibaateeya Wariyaasha.
Ugu dambeyn Xoghaye Omar ayaa Wariyaasha u sheegay, Ka Urur Ahaan, inaysan ka gaabin doonin Halganka ay ugu jiraan Raadinta Xuqquuqda Wariyaha iyo Warbaahinta Xorta ah. – Radio Shabelle
Wafdi Ka Socda Dowlad Goboleedka Galmudug Oo Gaaray Dowlad Degaanka Soomaalida Itoobiya